Amasiko Okuhlukahluka - UTrump Eco Technology Co., Ltd.
I-HDPE 80mil -2.0mm
Umhubhe kanye nemigwaqo yemigwaqo
Isakhiwo & Uphahla
Amaphrojekthi eDamu naseLake
Siqoqe embonini iminyaka engama-38. Yini esekela intuthuko yethu? Kungamandla angokomoya anesibindi nenkolelo kanye nokwenza kwempahla okuqhubekayo. Akunakuphikwa ukuthi sinezinto zokusebenza ezisezingeni eliphakeme nezindlela zokuphatha, kepha amandla amakhulu okushayela akhiwa yile mvula yamasiko engabonakali ngumthombo wempumelelo yethu.
Okwamanje, njengenkampani ehlukahlukene futhi enamasiko amaningi, siyabona ukuthi intuthuko esimeme idinga ukuzinikela kwesikhathi eside kanye nokuzibophezela ngokuhlanganyela kusuka kwezomnotho, ezemvelo nezenhlalo.
Lapho sibhekene nokwanda kokungcola kwemvelo, sizibophezele ekuthuthukiseni nasekuvuseleleni izinto zokwakha ezinobungani bemvelo. Vumela amaphrojekthi asebenzise izinto zokwengeza imvelo noma akhulise izinsizakusebenza ezingasetshenziswa kabusha.
Vumela wonke umsebenzi asebenze ngentshiseko, athande imboni nesikhundla sethu, futhi avuselele njalo amakhono nolwazi lwabo. Vumela wonke umsebenzi abe nguchwepheshe esikhundleni sakhe. Vumela abasebenzi babelane ngezithelo zentuthuko yezinkampani nemindeni yabo kanye nezingane zabo. Singumndeni omkhulu.
Vumela amakhasimende athole imikhiqizo ebaluleke kakhulu, ake abasebenzi bathole intuthuko ethembisayo, benze umphakathi ulungele imvelo kakhulu, futhi uvumele abahlinzeki bathuthukise futhi bathuthuke. Amakhasimende, abasebenzi, abahlinzeki kanye nomphakathi kuyahambisana ngentuthuko esimeme.
I-Trump Eco Technology Co, Ltd.yinkampani enkulu ebandakanyeka ocwaningweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwe-geosynthetics kanye ne-macromolecule izinto ezingangeni manzi.
Ikheli: No.32, kususwa isakhiwo sehhovisi, uJinke Road, Isifunda saseJinniu, eChengdu, eChina 610036